Ny Turkish Airlines sy Belavia dia tsy hanidina intsony ireo Irakiana, Syriana ary Yemenita mpifindra monina ho any Belarosia
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny Turkish Airlines sy Belavia dia tsy hanidina intsony ireo Irakiana, Syriana ary Yemenita mpifindra monina ho any Belarosia
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Belarus • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Zon'olombelona • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Turkey Breaking News
Ny Turkish Airlines sy Belavia dia tsy hanidina intsony ireo Irakiana, Syriana ary Yemenita mpifindra monina ho any Belarosia.
Mifanaraka amin'ny fanapahan-kevitry ny manampahefana Tiorka mahefa, manomboka ny 12 Novambra 2021, dia tsy ekena ho entina amin'ny sidina avy any Torkia mankany Belarosia ny olom-pirenen'i Irak, Syria ary Yemen.
Ny zotram-piaramanidina nasionalin'i Belarosiana dia tsy mamela ireo Irakiana, Syriana ary Yemenita mpifindra monina hiditra amin'ny sidina avy any Torkia mankany Belarosia.
Ny Turkish Airlines dia tsy hivarotra tapakila sidina Belarosiana amin'ny mponina ao Iraka, Syria ary Yemen.
Ny Vondrona Eoropeana dia mametraka ny andraikitra amin'ny krizy mpifindra monina tsy ara-dalàna amin'ny mpanao didy jadona Belarosiana Lukashenko.
Eo ambanin'ny fandrahonana sazy fanampiny, mpitatitra sainam-pirenena Belarosiana, Belavia, nanambara fa nitsahatra tsy nandray ny olom-pirenen'i Irak, Syria ary Yemen tamin'ny sidina avy any Torkia mankany Belarosia.
"Mifanaraka amin'ny fanapahan-kevitry ny manampahefana Tiorka mahefa, manomboka ny 12 Novambra 2021, ny olom-pirenen'i Irak, Syria ary Yemen dia tsy ekena ho entina amin'ny sidina avy any Torkia mankany Belarosia," Belavia hoy ny fanambaran'ny sampan-gazety.
Vao maraina, Turkish Airlines nanambara ihany koa fa tsy hivarotra tapakila amin'ny sidina mankany Belarosia amin'ny mponina ao Iraka, Syria ary Yemen, noho ny krizy fifindra-monina tsy ara-dalàna ao amin'ny sisin-tanin'i Belarosiana sy Poloney.
Tsy hisy afa-tsy ireo mpandeha manana pasipaoro diplaomatika.
Ny krizy fifindra-monina any amin'ny sisintany Belarosiana miaraka amin'i Letonia, Litoania ary Polonina, izay nanombohan'ny mpifindra monina tsy ara-dalàna nirohotra nanomboka tamin'ny fiandohan'ity taona ity, dia nandeha mafy tamin'ny 8 Novambra.
Olona an'arivony maro no nanatona ny sisin-tanin'i Polonina teo amin'ny ilany Belarosiana ary nanandrana niampita tany Polonina. Tamin'ny fikasana hanafika ny sisin-tany dia novakian'izy ireo ny fefy tariby misy barazy.
Nametraka ny andraikiny tamin'ny firongatry ny krizy mpifindra monina tsy ara-dalàna tamin'ny Minsk sy ny mpanao didy jadona Belarosiana Lukashenko ny firenena eoropeanina (EU), ary niantso sazy bebe kokoa.